အပြာရင့်ရင့် အနမ်း - ဝီကီပီးဒီးယား
Hideko Sunshine ၏
"ไม่มีนิยาม" (Mai Mee Ni Yam) by တဝန် ဝိဟောကရတန and Thitipoom Techaapaikhun
၁၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ (၂၀၁၉-၁၀-၁၂) – ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ (၂၀၁၉-၁၂-၂၈)
အပြာရင့်ရင့် အနမ်း (အင်္ဂလိပ်: Dark Blue Kiss; ထိုင်း: Dark Blue Kiss – จูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียว, RTGS: Dark Blue Kiss – Chup Sut Thai Phuea Nai Khon Diao, lit. 'အပြာရင့်ရင့် အနမ်း – တစ်ကိုယ်တော်ဆရာကြီးအတွက် နောက်ဆုံးအနမ်း') သည် Tay Tawan၊ New Thitipoom၊ Pod Suphakorn၊ Gawin Caskey (Fluke) နှင့် Chayapol Jutamat (AJ) တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့် ၂၀၁၉ ထိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။
ဒါရိုက်တာ အောက်ဖ် နိုပ္ဖာရနစ္ဆ ရိုက်ကူးပြီး GMMTV က ထုတ်လုပ်သော ဤ ဇာတ်ကားသည် ၂၀၁၈ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၅ရက်က ကြေညာခဲ့သည့် "Wonder Th13teen" အစီအစဉ်အရ ၂၀၁၉ခုနှစ်အတွင်း GMMTV က ထုတ်လွှင့်မည့် ဇာတ်ကား ၁၃ကားတွင် တစ်ကားအပါအဝင် ဖြစ်သည်။
၂၀၁၉ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၂ရက်မှ စတင်ကာ GMM 25 နှင့် LINE TV တို့က အပတ်စဉ် စနေနေ့ ၂၁:၂၅ နာရီနှင့် ၂၃:၀၀ နာရီတို့တွင် အသီးသီး ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ရာ ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ရက်တွင် ဇာတ်သိမ်းသည်။
၆ ပြည်ပ ထုတ်လွှင့်မှု
ဤဇာတ်လမ်းတွဲမှ သရုပ်ဆောင်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
Pete အဖြစ် Tawan Vihokratana (Tay)
Kao အဖြစ် Thitipoom Techaapaikhun (New)
Sun အဖြစ် Suphakorn Sriphothong (Pod)
Mork အဖြစ် Gawin Caskey (Fluke)
Non အဖြစ် Chayapol Jutamat (AJ)
Rain အဖြစ် Pluem Pongpisal
Sandee အဖြစ် Lapassalan Jiravechsoontornkul (Mild)
Thada အဖြစ် Jirakit Thawornwong (Mek)
June အဖြစ် Nachat Juntapun (Nicky)
Manow အဖြစ် Patchatorn Thanawat (Ploy)
Kitty အဖြစ် Lapisara Intarasut (Apple)
Pete အဖေ အဖြစ် Krittaphat Chanthanaphot
Kao အမေ အဖြစ် Benja Singkharawat (Yangyi)
Non အဖေ အဖြစ် Paramej Noiam
barista အဖြစ် Thanaboon Wanlopsirinun (Na)
ไม่มีนิยาม Mai Mee Ni Yam Tawan Vihokratana (Tay)
ต่อให้เป็นจูบสุดท้าย Tor Hai Pen Joob Sud Tai Gawin Caskey (Fluke) 
၂၀၁၉၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၄တွင် GMMTV က "POLCA The Journey: Tay & New 1st Fan Meeting in Thailand" အမည်ရသည့် ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၂၁ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည်။ သို့သော် ကိုဗစ် ၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြောင့် ၂၀၂၀ ဩဂုတ်လ ၁ရက်နေ့၊ ၎င်းမှ နိုဝင်ဘာ ၂၈ သို့ ရက်ရွှေ့ရသည်။ မကျင်းပမီ တစ်လအလို၊ အောက်တိုဘာ ၂၁တွင် GMMTV က ၂၀၂၁ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ရက်နေ့မှ ကျင်းပတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည်။
Saturday 9:25 pm 12 October 2019 0.228% 
19 October 2019 0.3% 
26 October 2019 0.202% 
2 November 2019 0.251% 
9 November 2019 0.124% 
16 November 2019 0.241% 
23 November 2019 0.137% 
30 November 2019 0.2% 
7 December 2019 0.213% 
14 December 2019 0.179% 
21 December 2019 0.307% 
28 December 2019 0.201% 
2019 Best Couple တဝန် ဝိဟောကရတန and Thitipoom Techaapaikhun ဆန်ကာတင် 
2020 Favorite TV Series of the Year Dark Blue Kiss ဆန်ကာတင် 
2020 Best Official Soundtrack "ไม่มีนิยาม" (Mai Mee Ni Yam) by
Tawan Vihokratana and Thitipoom Techaapaikhun ဆုရရှိ 
ဂျပန် – SKY PerfecTV! က ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ ၁၂မှ စ၍ အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့ ဂျပန်စံတော်ချိန် ၂၃:၀၀ နာရီတွင် ထုတ်လွှင့်သည်။
ဖိလစ်ပိုင် – ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ ၁၀၌ Dreamscape Entertainment ကုမ္ပဏီက ယခုဇာတ်ကားအပါအဝင် GMMTV က ဇာတ်ကားငါးကား ထုတ်လွှင့်ခွင့် ရရှိထားကြောင်းနှင့် iWantTFC မှ ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၆တွင် ထုတ်လွှင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည်။
↑ “จีเอ็มเอ็มทีวี” จัดใหญ่ เปิดตัว 13 ซีรีส์ใหม่ ปี 2019။ Spring News။
↑ จากหนังสือนิยายแจ่มใส เอเวอร์วายสู่ ซีรีส์ใหม่ ปี 2019 (in th)။
↑ "เต" ออกโรงช่วย "นิว" งัดหลักฐานไลฟ์สด!!! (in th)။ News Plus (28 December 2019)။ 19 June 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 April 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ TV Time - Dark Blue Kiss (TVShow Time)။
↑ Dark Blue Kiss EngSub (2019)။9December 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 April 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dark Blue Kiss จูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียว - Official Trailer [Eng Sub]။ GMMTV (27 September 2019)။
↑ ไม่มีนิยาม Ost.Dark Blue Kiss จูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียว။ GMMTV Records။
↑ ต่อให้เป็นจูบสุดท้าย Ost.Dark Blue Kiss จูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียว။ GMMTV Records။
↑ "POLCA THE JOURNEY" TAY & NEW 1st FAN MEETING IN THAILAND။ GMMTV (24 December 2019)။
↑ "POLCA THE JOURNEY" TAY & NEW 1st FAN MEETING IN THAILAND (in th)။ GMMTV (24 December 2019)။
↑ [ เลื่อนการแสดง "POLCA THE JOURNEY" TAY & NEW 1ST FAN MEETING IN THAILAND (ขยายวันคืนเงิน)] (in th) (19 March 2020)။
↑ GMMTV on Twitter: "ประาศวันแสดงใหม่ "POLCA THE JOURNEY" TAY & NEW 1st FAN MEETING IN THAILAND။ GMMTV (30 June 2020)။
↑ POLCA THE JOURNEY TAY&NEW 1st FAN MEETING IN THAILAND. See you on February 20, 2021။ GMMTV (21 October 2020)။
↑ "สามีสีทอง" แฮปปี้! จบไป 1.743 (in th)။ เขวี้ยงรีโมท (15 October 2019)။
↑ ละครไทยจงเจริญ on Instagram: “รายงานเรตติ้งละคร ประจำวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ละคร/รายการทีวีที่มีคนดูมากที่สุด 🔝6มีดังนี้ 1. ละคร มธุรสโลกันตร์ 6.9 ➡️ 7.9 ⬆️ 2.…” (in en)။
↑ "เสือผา" พา "มธุรสโลกันตร์" เรตติ้งเกิน 10 (in th)။ เขวี้ยงรีโมท (28 October 2019)။
↑ "มธุรสโลกันตร์" ฟันเรตติ้งตอนจบ 11.084 (in th)။ เขวี้ยงรีโมท (4 November 2019)။
↑ เรตติ้งสุดสัปดาห์มาแล้วจ้า! เริ่มกันเลยไม่ต้องเสียเวลาอ่านดังนี้ (in th)။ เขวี้ยงรีโมท (11 November 2019)။
↑ เรตติ้งสุดสัปดาห์ "ตะกรุดโทน" ยืน7"เขาวานให้หนูฯ" ยืน3(in th)။ เขวี้ยงรีโมท (18 November 2019)။
↑ "ตะกรุดโทน" โหนเรตติ้ง "เขาวานให้หนู" สู้สุดใจ (in th)။ เขวี้ยงรีโมท (25 November 2019)။
↑ ละครไทยจงเจริญ on Instagram: “รายงานเรตติ้งละคร ประจำวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ละคร/รายการทีวีที่มีคนดูมากที่สุด 🔝4มีดังนี้ 1. ละคร ตะกรุดโทน 8.1 🔃 2. รายการ 7…” (in en)။
↑ มหกรรมเรตติ้ง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ (in th)။ เขวี้ยงรีโมท (9 December 2019)။
↑ "เขาวานให้หนูเป็นสายลับ" ส่งท้ายเรตติ้งตอนอวสาน 5.563 (in th)။ เขวี้ยงรีโมท (16 December 2019)။
↑2รายการแข่งขัน "สุดพีค" รอบไฟนอล (in th)။ เขวี้ยงรีโมท (23 December 2019)။
↑ บุพเพฯ VS สารวัตรใหญ่ ศึกรีรันชิงเรตติ้งส่งท้ายปี (in th)။ เขวี้ยงรีโมท (2 January 2020)။
↑ ၃၀.၀ ၃၀.၁ กลับมาอีกครั้ง !! MAYA AWARDS 2020 [17 รางวัลมหาชน] (in th)။ Maya Channel (30 April 2020)။
Dark Blue Kiss on GMM 25 website (in ထိုင်း)
Dark Blue Kiss on LINE TV
အိုင်အမ်ဒီဘီပေါ်ရှိ အပြာရင့်ရင့် အနမ်း
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အပြာရင့်ရင့်_အနမ်း&oldid=737266" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ မတ် ၂၀၂၂၊ ၀၂:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။